Kuvhurwa kwaSiri kuchasvika paWWDC 2016 | IPhone nhau
Kuvhura Siri Kuuya KuWWDC 2016; zvinogoneka smart mutauri munzira
Mubatsiri weApple, Siri ndiye akatanga kusvika nharembozha. Ipa pane iyo iPhone kubva 2011, Siri anga achivandudza nekufamba kwenguva, asi asara zvishoma kumashure kwevadzivisi vayo. Yese mhosva yeiyi kutonga uko Apple inoda kuve pamusoro payo yese software, asi zvinoita sekunge vhezheni itsva ichauya kubva muruoko rweIOS 10 iyo ichakwanisa kuita zvakawanda kupfuura vhezheni yatange tichishandisa kudaro kure.
Maererano ne The Information, uyo anodudza masosi padyo neprojekti, Apple inoronga kutora nhanho kumberi mumunda wevachenjeri vabatsiri uye iri kugadzirira SDK Siri yevatatu-bato vanogadzira iyo ichaunzwa kuWWDC 2016 kutanga June 13. Neizvi tinogona, semuenzaniso, kukumbira Siri kuti atumire WhatsApp kune waanosangana naye nenzira imwecheteyo yatinogona kutumira iMessage / SMS kana kutsikisa tweet tisina kupinda muchirongwa.
Apple Kuburitsa Nyowani Siri SDK paWWDC
Kuvhura yako Siri izwi mubatsiri kune wechitatu-bato app vagadziri ndiro rinokurumidza nhanho. Apple iri kugadzirira kuburitsa yekuvandudza software kit, kana SDK, yevagadziri veapps avo vanoda kuti maapplication avo asvikike kuburikidza naSiri, sekureva kwemunhu ane ruzivo rwakanangana nebasa.
Kune rimwe divi, Ruzivo zvakare runoti Apple iri kushanda mutauri akafanana neAmazon Echo ine maikorofoni yenguva dzose-yatinogona kushandisa kuita zvinhu sekuvhura mimhanzi, kuteerera kune misoro yenhau, kana kuronga kuverenga pasi. Google yakaunzawo chishandiso chakafanana svondo rapfuura, saka hongu, tinogona kutaura kuti mune iyi Apple iri kumashure kwemakwikwi.
Ndinovimba ruzivo rwuri muIruzivo rwakarurama uye isu tichaona, zvirinani, kuti shanduko yemubatsiri weApple mune isingasviki mwedzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Siri » Kuvhura Siri Kuuya KuWWDC 2016; zvinogoneka smart mutauri munzira